Xinhua Myanmar - ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် လူအများအပြား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအစီအစဉ် စတင်
ရုရှား	မော်စကိုမြို့	COVID-19	Russia	Moscow	vaccination	ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ ပြင်ပ Kommunarka ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကို တွန်းနေသည့် အကာအကွယ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Europe
မော်စကို၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ရုရှားနိုင်ငံ မြို့တော် မော်စကိုတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အစီအစဉ် စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မော်စကိုမြို့တော်ဝန် Sergei Sobyanin က ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ကူးစက်မှုခံရနိုင်ခြေအများဆုံး လူအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများသည် ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေး ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဆေးထိုးနှံရန်အတွက် လူ ၅,၀၀၀ ကျော် စာရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Sobyanin က ၎င်း၏ ဘလော့ဂ်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
မော်စကိုမြို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း Sobyanin က ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပို့ဆောင်လာတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေအတွက် အထူးသိုလှောင်ရုံတွေကို ရွေးချယ်ထားပြီး ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ အအေးခန်းတွေလည်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမယ့်နေရာတွေမှာလည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံး ရေခဲသေတ္တာတွေ ထားရှိပြီး ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အထူးသင်တန်းပေးထားပြီးပါပြီ” ဟု ၎င်းက ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် လျှောက်ထားသည့် အုပ်စုများအတွက် ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်ရန် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင် ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်ဝန်က ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်က ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှု အရေအတွက် ၂ သန်းခန့်အထိ ရောက်ရှိလာသဖြင့် လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် လူအများအပြား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု စတင်ရန် အစိုးရကို ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၂၇,၄၀၃ ဦး မှတ်တမ်းရှိခဲ့သဖြင့် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၂,၄၀၂,၉၄၉ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သော မော်စကိုမြို့တွင် တစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်မှုအသစ် ၆,၈၆၈ ခု ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၆၃၂,၀၅၇ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#Russia, #Moscow, #vaccination, #COVID_19, #Xinhua, #ရုရှား, #မော်စကို, #ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း, #ဆင်ဟွာ
MOSCOW, Dec.4(Xinhua) -- Moscow Mayor Sergei Sobyanin announced Friday that the Russian capital has launched its mass immunization program against the coronavirus.
Medical workers, teachers, and social services employees will be the first to receive the vaccines as they belong to the most vulnerable groups, and over 5,000 people have already signed up for the shot, Sobyanin said on his blog.
He said on Thursday that online vaccine registration in the city would open on Friday.
"We have selected specialized warehouses and prepared refrigerators and freezers for vaccine shipments. Vaccination points have medical refrigerators and their personnel have completed special training courses," he added.
The mayor said more shipments of vaccine doses are expected to arrive in the following weeks, making the vaccine available forabroader group of applicants.
Russian President Vladimir Putin on Wednesday instructed the government to begin large-scale COVID-19 vaccinations next week as the number of produced vaccine doses were about to reach two million.
Russia has recorded 27,403 more COVID-19 infections over the past 24 hours, raising the national tally to 2,402,949.
Moscow, the country's worst-hit region, reported 6,868 new cases over the past day, bringing the city's total to 632,057. Enditem
A medical worker wearing protective gear pushesawheelchair atahospital in Kommunarka outside Moscow, Russia, on Dec. 3, 2020. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Previous Article အနာဂတ်ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြန်လည်စတင်ရန် ဗြိတိန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ညွှန်ကြား
Next Article ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး လက်တွေ့ထိုးနှံအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်